कोरोना आज : मृतकको संख्या ८ हजार नाघ्यो‚ २ लाख बढी संक्रमित
नेपाल लाइभ बुधबार, चैत ५, २०७६, १६:१६
काठमाडौं- विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार नाघेको छ भने संक्रमितको संख्या दुई लाखमाथि पुगेको छ।
बुधबार दिउँसो ३ः३० बजेसम्ममा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या २ लाख ७१, मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार ९ र उपचारपछि निको हुनेको संख्या ८२ हजार ८ सय ३१ पुगेको वल्डोमिटर डट इन्फोले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै बुधबार विभिन्न देशमा गरेर एक हजार ३ सय ८७ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन् भने ४२ जनाको मुत्यु भएको छ।
बुधबार कहाँ के भयो?
- मलेसियामा ११७ नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- केन्यामा ३ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- नर्वेमा १५ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन् भने एक जनाको मुत्यु भएको छ।
- लेबनानमा ९ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- पराग्वेमा २ नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- मोरोक्कोमा ५ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- इन्डोनेसियाममा ५५ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन् भने १२ जनाको मुत्यु भएको छ।
- लिथुआनियामा १ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- जर्मनीमा ४७ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- नर्वेमा १३ जना नयाँ बिरामी भेटिनुका साथै १ जनाको मुत्यु भएको छ।
- आइभरिकोस्टमा २ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- स्लोभाकियामा ८ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- बेलारूसान १५ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- फिलिपिन्समा १५ जना नयाँ बिरामी भेटिनाका साथै ३ जनाको मुत्यु भएको छ।
बुधबार दिउँसो १:३० बजेसम्म विश्वमा कहाँ के भयो?
- बंगलादेशमा एउटा नयाँ केस भेटिएको छ। इटालीबाट आएका मानिसलाई जागिपुरस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ।
- चीनको मकाओ एसएआरमा एक जना नयाँ बिरामी भेटिएको छ।
- अरुबामा १ नयाँ बिरामी भेटिएको छ।
- जर्जियामा ४ नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- भारतमा ५ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्। भारतीय सेनामा पहिलो पटक कोरोना भेटिएको छ, जसका बुबा इरानको तीर्थयात्राबाट फर्किएका थिए।
- भारत सरकारले इयु, युके, टर्कीबाट यात्रा गरिरहेका भारतीय राहदानी भएका मानिसलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ।
- श्रीलंकामा १ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- मंगोलियामा १ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- हंगेरीमा ८ जना बिरामी भेटिएका छन्।
- काजकिस्तानमा २ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- ब्राजिलमा ३ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- इजरायलमा ९० जना बिरामी भेटिएका छन्।
- संयुक्त राज्य अमेरिकामा १११ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन् भने ७ जनाको मुत्यु भएको छ।
- कोलम्बियामा १० जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- भियतनाममा २ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- मेक्सिकोमा ११ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्। जसमध्ये १४ प्रतिशतलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ भने २ प्रतिशतको अवस्था चिन्तजनक छ।
- ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा २ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- रुवाण्डामा १ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- फिलिपिन्समा जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- थाइल्याण्डमा ३५ नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- उज्बेकिस्तानमा २ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- अस्ट्रेलियामा १०५ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन् भने एक जनाको मुत्यु भएको छ। त्यहाँका नागरिकलाई सम्पूर्ण देशमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यहाँको सरकारले स्कुलहरु बन्द नगर्ने निणर्य गरेको छ। एनएसडब्लुमा ५७ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन् भने एक जनाको मुत्यु भएको छ। भिक्टोरियामा २७ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्। क्विन्सल्याण्डमा १६ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्। दक्षिण अस्ट्रेलियामा ५ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- जापानमा ४ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन्।
- दक्षिण कोरियामा ९३ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन् भने तीन जनाको मुत्यु भएको छ।
- चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी)मा गरिएको रिपोर्ट अनुसार १३ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन् भने ९२२ जना डिस्चार्ज भएका छन्।
'कोभिसिल्ड' भ्याक्सिनलाई आपतकालीन प्रयोग गर्न नेपालको अनुमति औषधि व्यवस्था विभागले शुक्रबार सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्डलाई आपतकालिन प्रयोगको लागि सशर्त अनुमति दिने... शुक्रबार, माघ २, २०७७
इन्डोनेसियामा ६.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प, ३४ जनाको मृत्यु सुलावेसी द्वीपको मामुजु शरहमा मात्र यस भूकम्पको कारण २६ जनाको मृत्यु भएको यहाँको प्रकोप नियन्त्रण विभागका प्रमुख अलि रहमानले बताएका... शुक्रबार, माघ २, २०७७
कोरोना परीक्षण गर्ने ‘क्रिस्पर टेक्नोलोजी’ नेपालमा पनि प्रमाणीकरण, पिसिआर भन्दा सस्तो हुने अमेरिकाको म्यासाच्युट इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) विश्व विद्यालयका वरिष्ठ अनुसन्धान वैज्ञानिकको रुपमा कार्यरत नेपाली वैज्ञान... शुक्रबार, माघ २, २०७७